အသံများ | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
အသံများ	Posted by mm thinker on June 7, 2008
Posted in: Experience, Nargis.	Tagged: Nargis.	နာဂစ်အလွန် ခရီးသွားမှတ်တမ်း (၇)
ရွာထဲက အိမ်တွေ အမိုးလန်တာ၊ ဘေးပွင့်တာလောက်ပဲဖြစ်သည်။ နာဂစ်အပြီး နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာမှာ စားစရမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စားတွေဆိုတော့ အလုပ်မရှိတော့ ထမင်းငတ်ကြသည်။ ချေးငှားစားဖို့လည်း ယခင်လို အိမ်နီးနားချင်းတွေက မပြေလည်။ ဒီတော့ ရွာထဲက ကန်စွန်းပင်၊ မကျီပင်၊ ခွေးတောက်ပင်တွေပါမကျန် အလုပ်ဖြစ်ကြသည်။ နာဂစ်ကြောင့် ဒုက္ခသည် လုံးလုံးဖြစ်သည်တော့ မဟုတ်။ ကုန်ဈေးနှုန်းဒဏ်ကြောင့် အိမ်မပြင်နိုင်၊ ထမင်းနပ်မမှန်နိုင် ဖြစ်ကြသူတွေမို့လို့ ကျနော်က ဆီမီး-ဒုက္ခသည်တွေဟု ခေါ်လိုက်သည်။ နောက်နေ့ လေးဒေါင့်ကန်ဘက် ရောက်သည်။ သူငယ်ချင်းအိမ်ဝင်တော့ သူမရှိ။ သူ့မိဘတွေနှင့် စကားလက်ဆုံ ပြောမကုန်။ ဦးလေးကြီးက `တို့တွေဆီ ထမင်းထုတ်၊ ဆန်ထုတ် လာဝေတယ်။ တို့တော့ ဒီလောက် ဒုက္ခမရောက်လို့ သွားမယူပါဘူး။ ဒီလိုဝေတာမှာ နှစ်ပြန်၊ သုံးပြန် တန်းစီတဲ့ လူတွေလည်း ရှိတယ်။ အမှန်က တို့တွေရဲ့ ဒုက္ခထက် ဟို ဧရာဝတီတိုင်းတို့ဘက်မှာ ပိုဆိုးတယ်။ အဲဒီဘက်မှာ သွားဝေကြစမ်းပါ´ဟုပြောသည်။ အမေရိကန် ၀င်မှာလားဟုလည်း မေးသည်။
ညဘက်မှာ ဘာလို့ ကားတွေ မရှိတော့တာလည်း အဖြေရှာတော့ စီအန်ဂျီတန်းစီနေကြလို့ပါတဲ့။ နေ့ခင်းဘက် လိုင်းကားပေါ်မှာ စပယ်ယာတစ်ယောက်ညဉ်းတာ ပြန်ကြားယောင်သည်။ `မနက် ခြောက်နာရီကနေ ညဆယ်နာရီအထိ မနာတမ်းလုပ်တာ ထမင်းဖိုးနဲ့ အရက်ဖိုး လောက်ငှရုံပဲရတယ်။ စိတ်ပျက်တယ်´တဲ့။ သင်္ကန်းကျွန်းစံပြဈေးဘက်ကို လမ်းကြားက အဖြတ် ဆွဲခြင်းတစ်လုံးနဲ့ အမေကြီးတစ်ယောက်က အော်ဟစ်ညဉ်းတွားကာ ဈေးဘက်သို့သွားနေသည်။ `ဟဲ့ အငြိမ်းစားလည်းယူခဲ့ပြီ။ ပင်စင်ကလည်း မဖြစ်စလောက်။ ဒီကြားထဲ အိမ်လေးပျက်သွားလို့ စာရင်းပေးတာ စာရင်းမပါဘူးတဲ့တော်။ သူတို့ အမျိုးတွေကျတော့ အမိုးလန်တာနဲ့တင် စာရင်းထည့်တယ်။ ရပ်ကွက်က ပြင်မပေးရင် ကျုပ်က ဘယ်လို ပြန်ပြင်နိုင်မတုန်း။´
← နာဂစ်အလွန်…တံခါးဖွင့်လိုက်	နာဂစ်အလွန် ခရီးသွားမှတ်တမ်း (၈) →	Pages	about